International Kurambana magweta muNetherlands - Law & More
Kurambana chiitiko chikuru kune wese munhu. Ndosaka magweta edu ekurambana aripo nekuda kwako nemazano ako pachako. Nhanho yekutanga pakurambana ndeyekuhaya gweta rekurambana. Kurambana kunoziviswa nemutongi uye gweta chete ndiro rinogona kunyora chikumbiro chekurambana nedare. Pane akasiyana marongero epamutemo kuhurongwa hwekurambana anotemwa nedare. Mienzaniso yezvinhu zviri pamutemo izvi…
UNODA BATSIRO NESANGO RAKO?
NDICHAIDZEI KUTI TITI VAMWE VANOTADZA MITEME YEMAHARA
Kurambana chiitiko chikuru kune wese munhu.
Ndosaka magweta edu ekurambana aripo nekuda kwako nemazano ako pachako.
> Nhanho-nhanho chirongwa kubva kumagweta edu ekurambana
> Chii chekutora kune gweta rekurambana?
> Kurambana nevana
> Inowanzo bvunzwa mibvunzo kurambana
Nhanho yekutanga pakurambana kurapa gweta. Kurambana kunoziviswa nemutongi uye gweta chete ndiro rinogona kunyora chikumbiro chekurambana nedare. Pane akasiyana marongero epamutemo kuhurongwa hwekurambana anotemwa nedare. Mienzaniso yezvinhu zviri pamutemo izvi ndeiyi:
Zvinhu zvako zvayakabatanidzwa zvinopatsanurwa sei?
• Wawakaroorana naye ane kodzero yekuwana chikamu chepenjeni yako here?
Ndeipi mhedzisiro yemutero yekurambana kwako?
Mumwe wako ane kodzero yekutsigirwa nemurume / mukadzi here?
• Kana zvirizvo, imarii iyi?
• Uye kana uine vana, kusangana navo kwakarongwa sei?
Nhanho-nhanho chirongwa kubva kumagweta edu ekurambana
Paunobata kambani yedu, mumwe wemagweta edu ane ruzivo achataura newe zvakananga. Law & More inozvitsauranisa pachayo kubva kumamwe mafemu emutemo nekuti femu yedu haina hofisi yemabharani, inova nechokwadi chekuti tine mitsara mifupi yekutaurirana nevatengi vedu. Paunobata magweta edu nerunhare zvine chekuita nekurambana, vanobva vatanga kukubvunza mibvunzo yakati wandei. Tichazokukoka kuhofisi yedu kuEindhoven, kuitira kuti tikwanise kukuziva. Kana iwe uchida, musangano wacho unogonawo kutora nhare kana musangano wevhidhiyo.
• Panguva yekugadzwa kwekutanga iwe unogona kutaura nyaya yako uye isu tichatarisa kumashure kwemamiriro ako ezvinhu. Magweta edu akasarudzika ekurambana achabvunzawo mibvunzo inodiwa.
Tinobva takurukura newe matanho chaiwo anofanira kutorwa mumamiriro ako ezvinhu uye tinonyora izvi zvakajeka.
• Pamusoro pezvo, panguva yemusangano uno ticharatidza kuti danho rekurambana rinotaridzika sei, zvaunogona kutarisira, kutora kwacho kunotora nguva yakareba zvakadii, magwaro api atinoda, nezvimwe.
• Nenzira iyoyo, iwe unenge uine zano rakanaka uye nekuziva zviri kuuya. Hafu yekutanga yeawa yemusangano uyu mahara. Kana, panguva yemusangano, ukasarudza kuti ungade kubatsirwa nemumwe wemagweta edu ane ruzivo rwekurambana, isu tinorekodha zvimwe zvemashoko ako kuitira kuti tiite kontrakta yechibvumirano.
Kurambana kunokanganisa vana zvakanyanya. Naizvozvo, isu tinonamatira kukosha kukuru kune zvinofarira zvevana vako
Mushure memusangano wekutanga, iwe unobva wagamuchira kupihwa chibvumirano kubva kwatiri neemail. Chibvumirano ichi chinotaura, semuenzaniso, kuti isu tinokurairidza nekukubatsira iwe panguva yekurambana kwako. Isu zvakare tichakutumira iwe yakajairwa mazwi uye mamiriro anoshanda kune edu masevhisi. Iwe unogona kusaina digitally chibvumirano chebasa.
Kugamuchira chibvumirano chakasainwa chekupihwa, magweta edu ane ruzivo ekurambana achabva atanga kushanda pane yako kesi. At Law & More, iwe uchazoziviswa nezve ese matanho aunotorerwa negweta rako rekurambana. Nomuzvarirwo, nhanho dzese dzinotanga kubatanidzwa newe.
Mukuita, danho rekutanga kazhinji kazhinji kutumira tsamba kune mumwe wako neye ziviso yekurambana. Kana iye atove negweta rekurambana, tsamba inoendeswa kugweta rake.
Mutsamba iyi tinoratidza kuti iwe unoda kuramba mumwe wako uye kuti iye anokurudzirwa kuwana gweta, kana iye asati atoita zvakadaro. Kana mumwe wako atove negweta uye isu tikanyorera tsamba kune gweta rake, isu tinowanzo tumira tsamba inotaura zvido zvako maererano, semuenzaniso, vana, imba, zvirimo, nezvimwe.
Gweta remumwe wako rinokwanisa kuzopindura tsamba iyi nekutaura zvido zvemumwe wako. Mune zvimwe zviitiko, musangano wenzira ina wakarongwa, panguva yatinoedza kuwana chibvumirano pamwe chete.
Kana zvisingaite kuti muwirirane nemumwe wako, tinokwanisa kuendesa chikumbiro chekurambana takananga kudare. Nenzira iyi, maitiro anotangwa.
• Uri munhu wega here?
• Iwe unoda kurairwa pamutemo here?
Unoda here nzwisiso yakajeka yenzvimbo yako yepamutemo?
Ita CHEMA CHEKANI ITSI!
Bata isu zvakananga kuburikidza bhatani.
Tinokufonera back nekukurumidza sezvinobvira.
Chii chandinofanira kuenda neni kugweta rekurambana?
Kuti utange nzira yekurambana nekukurumidza sezvinobvira mushure memusangano wekutanga, anoverengeka magwaro anodikanwa. Rondedzero pazasi inopa chiratidzo chegwaro rinodiwa. Haasi ese magwaro anodikanwa kune ese kurambana. Gweta rako rekurambana rinoratidza, mune yako chaiyo kesi, magwaro anodiwa kuronga kurambana kwako. Mukutaura, magwaro anotevera anodikanwa:
• Kabhuku kemuchato kana chibvumirano chekugara pamwe chete.
• Gwaro rine chibvumirano chepamberi kana chekudyidzana. Izvi hazvishande kana iwe wakaroora munharaunda yemba.
• Gwaro rezvikwereti uye tsamba inoenderana nazvo kana chibvumirano chekurendesa imba.
• Ongororo yemabhengi maakaundi, maakaunzi ekuchengetedza, maakaundi ekudyara
• Zvinyorwa zvegore negore, mapepa ekubhadhara uye zvirevo zvebatsiro.
• Mitero mitatu yekupedzisira yemitero.
• Kana uine kambani, maakaundi matatu ekupedzisira egore.
• Inishuwarenzi yehutano.
• Kuongorora nezve inshuwarisi: muzita ripi mune inishuwarenzi?
• Mashoko pamusoro pemari yepenjeni yakawedzerwa. Pension yakavakwa kupi panguva yemuchato? Ndivanaani vaive vatengi?
• Kana paine zvikwereti: unganidza magwaro anotsigira uye huwandu uye nguva yezvikwereti.
Kana iwe uchida kuti kurambana kutange nekukurumidza, zvine hungwaru kutora magwaro aya pamberi. Gweta rako rinobva rasvika pakushandira nyaya yako nekukurumidza mushure memusangano wekutanga!
Kana vana vabatanidzwa, zvakakosha kuti zvido zvavo zvitarirwewo. Isu tinoona kuti izvi zvinodiwa zvinotorwa mukufunga sezvinobvira. Magweta edu ekurambana anokwanisa kuronga chirongwa chekurera newe pamwe nekuparadzaniswa kwekuchengetwa kwevana vako mushure mekurambana. Tinogona zvakare kuwerengera iwe huwandu hwesupoti yemwana yekubhadharwa kana kugamuchirwa
Wakatorambana uye une gakava nezve, semuenzaniso, kutevedzera mumwe wako kana kutsigira kwemwana? Kana iwe une chikonzero chekutenda kuti wako wawakambodanana naye iye zvino ave nemari yakakwana yemari yekuzvitarisira iye? Zvakare mune izvi zviitiko, magweta edu ekurambana anogona kukupa iwe rubatsiro rwemutemo.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo kurambana
Zvinoda marii kutsvaga gweta?
Law & More inoshanda pahwaro hweyero yeawa. Yedu nguva yeawawa i € 195, kusanganisa 21% VAT. Yekutanga hafu-awa kubvunza haina rusununguko. Law & More haishande pahwaro hwerubatsiro rwakapihwa nehurumende.
Ndeipi nzira iri kushanda ye Law & More?
Magweta pa Law & More vanobatanidzwa mumatambudziko ako. Tinotarisa mamiriro ako ezvinhu tobva tadzidza chinzvimbo chako chepamutemo. Tese pamwe newe, isu tinotsvaga mhinduro inogadzikana kunharo kana dambudziko rako.
Nzira yekurambana inotora nguva yakareba sei?
Kana iwe uchibvumirana, iwe unogona kuhaya mubatanidzwa gweta. Panguva iyoyo, dare rinogona kuzivisa kurambana nekuraira mukati memavhiki mashoma. Kana iwe usingabvumirani, mumwe nemumwe wako anofanira kutora gweta rake. Pakadaro, kurambana kunogona kutora mwedzi.
Dare redzimhosva rinodiwa here kurambana?
Kana iwe ukasarudza kurambana pamwe chete, hapana chikonzero chekutongwa kwedare. Kurambana kwakafanana kunoitwa padare redzimhosva.
Mukutaurirana, iwe unoedza kuwana mhinduro pamwe nerimwe bato uchitarisirwa nemurevereri. Chero bedzi paine kuda kumativi ese maviri kutsvaga mhinduro, kuyananisa kune mukana wekubudirira.
Kuita kwekutaurirana kunoshanda sei?
Maitiro ekurevererana ane: kubvunzurudzwa kwekudya uye zvikamu zvinoverengeka kusvika pachibvumirano. Kana chibvumirano chikasvika, zvibvumirano zvakaitwa zvinonyorwa pasi zvakanyorwa.
Ini ndakarambana rinhi?
Iwe wakarambana kubva pazuva rakatemwa chirevo chekuti kurambana chinowanikwa mumarejista erejista registry yemaspala mawakaroora.
Wangu wandaimbova naye uye hatigone kubvumirana pakugovaniswa kwenzvimbo yemhuri yemichato, chii chatinofanira kuita izvozvi?
Unogona kukumbira dare kuti rione (nzira) yekugovana nharaunda yemuchato yepfuma pakati pako newawakarambana naye.
Chii chatinofanira kuita neyakajairwa chivakwa?
Kana iwe wakaroora munharaunda yemba, unogona kupatsanura zvinhu izvi nehafu kana kuzvitora kubva kune mumwe munhu kuti zvione kukosha kwazvo.
Ini ndoda kuramba ndichigara mumba medu takabatana, zvinoita here?
Pokutangira ndekwekuti iwe unogona kuenderera mberi nekugara mumubatanidzwa imba, chero iwe uri mune zvemari uchigona kubhadhara hafu yechinhu chipi zvacho chemari yakasara kune wako wawakanga urikudyidzana naye uye wako wekare wawakaroorana naye aburitswe kubva kune akabatana uye akati wandei mutoro wezvikwereti zvemogeji.
Kubviswa kwekugara musina kuroora, zvinoshanda sei?
Iwe unogona kuronga kugadzirisa kwemari kwehukama kunze kwedare. Kana iwe uine vana pamwe chete pane imi mose munoshandisa masimba, imi munosungirwa zviri pamutemo kugadzira chirongwa chekurera vana.
Ndezvipi zvinokanganisa kurambana?
Mari dzegweta dzinoenderana nenguva inoshandiswa pachinhu chako. Mari dzematare idzo $ 309 (mari dzematare). Mubhadharo webhailiff wekushandira chichemo chekurambana chinosvika kungangoita zana eurandi.
Chii chinoitika kune yakavakirwa mudyandigere mushure mekurambana?
Mutemo wepamutemo (pension equalization) unoreva kuti une kodzero yekubhadharwa makumi mashanu muzana emudyandigere wezera rekare wakavakwa newawakarambana naye panguva yemuchato. Kana vaviri varikubvumirana, iwe unogona kushandura ako mvumo kuve yachembera-pension uye yemudyandigere mudyandigere mune yako wega yakazvimirira kodzero kune yezera-yezera pension (kutendeuka) kana kusarudza imwe chikamu.
Chii chinonzi chibvumirano chekurambana?
Chibvumirano chekurambana chibvumirano pakati pevaimbova vaviri maunogona kuisa zvibvumirano paunorambana. Semuenzaniso, iwe unogona kuita marongero emari, marongero nezve vana uye alimony. Kana chibvumirano chekurambana chiri chikamu chemutemo wedare, zvinomanikidzwa zviri pamutemo.
Chii chandingaite kana wangu wandakaroora naye asingateereri mirau iri muchibvumirano chekurambana?
Kana chibvumirano chekurambana chiri chikamu chemutemo wedare, chibvumirano chekurambana chinopa zita rinomanikidzwa. Izvo zvino zvinomanikidzwa zviri pamutemo.
Chii uye chii chisina kuiswa mumhedzisiro yemumba?
Zvese zviri mumba, dura, gadheni uye garaji chikamu chezviri mukati. Izvi zvinoshandawo kumotokari kana dzimwe mota. Izvi zvinowanzo kutaurwa zvakasiyana muchisungo. Izvo zvisiri zvemukati zvirimo zvinhu zvakabatana, zvakavakirwa-mukati zvigadzirwa mukicheni uye, semuenzaniso, zvakaiswa pasi pasi.
Chii chinoitika kana ndakaroora munharaunda ine pfuma?
Kana iwe wakaroora munharaunda yemidziyo, muchimiro zvese zviwanikwa uye zvikwereti zvako iwe nemumwe wako zvakasanganiswa. Panyaya yekurambana, zvese zvinhu uye zvikwereti zvakagoverwa zvakaenzana pakati pako. Dzimwe nguva zvinogona kuve kuti zvimwe zvinhu zvinosarudzika, senge chipo kana nhaka.
Asi chenjera: kubvira 2018, muyero ndeyekuroora munharaunda yakaganhurirwa yenzvimbo. Izvi zvinoreva kuti midziyo yakaunganidzwa musati maroora haina kuiswa munharaunda. Izvo chete zvinhu izvo avo vakaroora vanounganidza panguva yewanano ndizvo zvinova zvakajairwa pfuma. Zvese zvinhu zvaive nemunhu pachivande musati maroora hazvibvumirwe. Zvese zvinouya mukuvapo mushure mekuroora maererano nezvinhu uye / kana zvikwereti, zvinova zvinhu zvevose vari vaviri. Pamusoro pezvo, zvipo nenhaka zvinoramba zviri zvako wega, zvakare panguva yemuchato. Imba inogona kuve yakasarudzika kune izvi, kana yakatengwa pamwe chete musati maroorana.
Chii chinoitika kana ndakaroora pasi pechibvumirano chewanano?
Pawakaroora iwe wakasarudza kuchengeta yako midziyo nezvikwereti zvakasiyana. Kana iwe uchida kuwana kurambana, funga nezve chero zvikamu zvekugadziriswa kana zvimwe zvakabvumiranwa kuronga.
Chii chinonzi chigaro chekugadzirisa?
Zvigaro zvekugara zvibvumirano zvekugadzirisa kana kugoverwa kweimwe mari nemitengo. Pane nzira mbiri dzekugadzirisa: 1) Chikamu chekugara kwenguva nenguva: pakupera kwegore rega chikamu chakasara chakachengetwa paakaundi chakakamurwa zvakaenzana. Sarudzo inoitwa yekuchengeta zvakavanzika zvinhu zvakasiyana. Kugadziriswa kunoitika mushure mekubhadharwa kwemitengo kubva kune yakavakirwa capital mari. 2) Chikamu chekupedzisira chekugadzirisa: Kana zvikaitika kurambana zvinokwanisika kushandisa chirevo chekupedzisira. Iwe nemumwe wako mozogovana nhumbi dzekubatana nenzira imwecheteyo sekunge iwe wakaroora muchibatana chemidziyo. Unogona kusarudza kuti ndezvipi zvinhu zvisina kuiswa muchikamu.
Ndezvipi zvinhu zvakabatana? Ndezvipi zvinhu zvinoramba zviri kunze kwenzanga yepfuma?
Mimwe midziyo haina kungoerekana yazivikanwa seyakaunganidzwa chivakwa chako neumwe wako. Zvinhu izvi zvinogona kunge zvisingafanirwe kuverengerwa panguva yekurambana. Nhaka kana zvipo zvinoramba zviri kunze kwenharaunda yepfuma kubva musi wa1 Ndira 2018. Pasati pa1 Ndira 2018, chirevo chekubvisa chaifanira kuverengerwa mugwaro rechipo kana kuda.
Chii chinoitika kana iwe uchigara munzvimbo yekuroja pamwe chete?
Mutongi ndiye anosarudza kuti ndiani anobvumidzwa kuramba achigara mumba mushure mekurambana, kana mese muchida kuramba muchigara imomo. Chibvumirano nesangano redzimba kana muridzi wemba chinofanirwa kuchinjwa, nemunhu anenge apihwa mvumo yekugarapo semuroja chete. Munhu uyu anobva azvidavirirawo kubhadhara rendi nezvimwewo mari.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve alimony
Nyaya dzekutsigira vana dzinoenderera sei?
Maitiro emalimony anotanga nekunyora chikumbiro. Dare richazopa mumwe wacho mukana wekuti ape chekuzvidzivirira. Kana izvi zvikaitwa, mafambiro acho achanzwikwa. Dare richazopa mutongo wakanyorwa.
Ndine kodzero here yekutsigirwa nemurume / mukadzi?
Une kodzero yekutsigirwa nemurume kana murume kana wakaroora kana kupinda mubatanidzwa wakanyoreswa uye haugone kuzvitsigira wega.
Wangu wepamberi shamwari haabhadhare mari yekuchengetedza, chii chandingaite?
Iwe unogona kupa wako-wawakaroorana naye chiziviso chekutadza uye kuseta nguva yekupedzisira mukati meiyo alimony inofanira kubhadharwa. Kana wako-wawakaroorana naye achiri asingabhadhare iyo alimony mukati meiyo nguva muganho, saka iyi inyaya yekutadza. Kana zvibvumirano zvekuchengetedza zvikasanganiswa muhurongwa, iwe une zita rinomanikidzwa. Iwe unogona ipapo kudzoreredza alimony kubva kune wako wawaimbova mudiwa naye kunze kwedare. Kana izvi zvisiri izvo, unogona kukumbira kutevedzwa mudare.
Ndeipi mhedzisiro yemitero yekubhadhara alimony?
Partner alimony mutero unobviswa kumubhadhari uye inoonekwa semutero wemari kune iye anogamuchira. Mwana alimony haibhadharwe mutero kana kubvisirwa mutero.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve vana vari mukurambana
Ini handidi kuti vana vangu vagare newandaimboshanda naye, ndinogona kuronga izvi?
Iwe unogona kukumbira dare kuti rimise pekugara revana vako newe. Dare richaita sarudzo yakadai seinoonekwa kunge yakanakira vana vako, ichifunga mamiriro ese enyaya yacho.
Iwe unofanirwa riini kuronga chirongwa chekuva mubereki uye chine chii?
Kana uine vana vadiki avo vawakabatanidzwa pamwe chete unosungirwa kugadzira chirongwa chekurera vana. Zvibvumirano zvinofanirwa kuitwa pamusoro penzvimbo huru yekugara yevana, kupatsanurwa kwekuchengetwa, nzira iyo sarudzo maererano nevana dzinoitwa, kuti ruzivo nezvevana runochinjaniswa sei uye kupatsanurwa kwemitengo yevana (rubatsiro rwevana).
Zvakadiniko nezvesimba revabereki mushure mekurambana?
Mushure mekurambana vabereki vese vanochengeta masimba evabereki, kunze kwekunge dare ratarisa kuti masimba evabereki akabatanidzwa anofanira kumiswa.
Ndini mvumo yekuwana mwana rubatsiro?
Une kodzero yekuwana rubatsiro rwemwana kana iwe pachako usina mari inokwana kupa mari yevana vako.
Huwandu hwerutsigiro rwemwana / mudiwa hunosarudzwa sei?
Iwe unogona kubvumirana pamusoro pehuwandu hwerubatsiro rwemwana / shamwari. Iwe unogona kunyora izvi zvibvumirano muchibvumirano. Kana dare rikanyora zvibvumirano izvi mumutemo wekurambana, zvinoitwa zviri pamutemo. Kana iwe usingakwanise kusvika pachibvumirano, unogona kukumbira dare kuti riwane huwandu hwerimendi. Mukuita kudaro, mutongi anozotarisa zvinhu zvakasiyana, senge mari, mari yemari, bhajeti remwana uye hurongwa hwekushanya.
Chii chinoitika kuzvinhu zvevana?
Izvi zvinhu zvivakwa zvevana pachavo. Vanogona kuzvisarudzira vega zvinoitika kwavari uye nemubereki wavanofanira kuenda naye. Kana vana vari vadiki zvekutadza kusarudza izvi, iwe nemumwe wako munofanira kuronga.
Kana iwe usina kuwana mhinduro kumubvunzo wako mune yedu runyorwa rwemibvunzo inowanzo bvunzwa, ndapota nyorera mumwe wemagweta edu ane ruzivo zvakananga. Vanogona kupindura mibvunzo yako uye vanofara kufunga pamwe newe!